Akụkọ - Site na "onye uru" rue ọchụnta ego, Liu Jianhong nke Xueruisha Group bụ nwoke nwere akụkọ
Site na "onye uru" rue ọchụnta ego, Liu Jianhong nke Xueruisha Group bụ nwoke nwere akụkọ
Nkwenye na ịchụso ndị ọsụ ụzọ
Nke a bụ nwoke nwere akụkọ. Site na ntachi obi siri ike, mmụọ na-adịghị ada ada, na ịchụso nke isi ike, okporo ụzọ dị n'okpuru ụkwụ ya nwere olile anya mgbe niile, ọ na-esetịpụ site na mmali na oke ... Onye na-eri crabs, agbanyeghị, site na nyocha ezi uche ya na ikpe ziri ezi, ọ masịrị ya ọkachasị n'oge ọ bụla. Site na nke a, ya na ndị ọrụ njikwa ya ejiri nlezianya kee-Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd. ghọrọ ụlọ ọrụ edepụtara edepụtara na Baoding ka ọ rute na bọọdụ Shijiazhuang City.
Amamihe, ịdị jụụ, na ịdị mfe bụ echiche mbụ nke onye nta akụkọ banyere Liu Jianhong. Omume niile na-egosi omume ọma. Ugogbe anya iko dị na akwa nke imi, okwu ndị a na-ekwu, ihu ọchị ya, yana asụsụ ezi uche dị na ya na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta banyere ọrụ nzuzo a. Ndi oru itumgbere ahia nwere ike ghara inyere ma ekele na nkwanye ugwu. Onyinyo nke onye ọchụnta ego Confucius ji nke nta nke nta pụta ìhè ka ajụjụ ọnụ ahụ na-aga n'ihu.
Na nrọ, onye isi ọchụnta ego
Na 1973, a mụrụ Liu Jianhong na ezinụlọ onye ọkụ azụ na Dazhangzhuang Village, Baiyangdian, Anxin County. N’afọ 1990, a nabatara ya n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị n’ihi ụkọ ego n’ụlọ ya wee kwụsị agụmakwụkwọ ya. Mgbe Liu Jianhong kwụsịrị ịga akwụkwọ, ọ gara ụlọ ọrụ mgbada na Anxin County ka ọ rụọ ọrụ dịka onye ọrụ na-achọ ajị ajị anụ. Ichapu ntutu bụ ọrụ siri ike ma na-agwụ ike. Liu Jianhong adịghị adalata ma ọ bụ kpọọ na-amị amị. O biliri n’isi ụtụtụ kelee ọchịchịrị ma rụsie ọrụ ike. O mere ngwa ngwa mere ka onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ nwee ekele na ntụkwasị obi o nwere. , Ọ na-akwalite akaụntụ na-erughị ọkara afọ.
Na 1992, na yuan 20,000 ọ chebere site na ọrụ nwa oge na nrọ nke ịmalite azụmaahịa, ya na ndị enyi ya rụkọrọ ọrụ iji gaa ndịda na Guigang City, Guangxi, wee bido ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ihe nkiri. Mgbe afọ atọ nke ịrụsi ọrụ ike, na 1995, Liu Jianhong dị afọ 22 nwere ọtụtụ nde isi obodo, ọ ghọrọ onye ntà nke nwe obodo Dazhangzhuang sitere na ezinụlọ dara ogbenye. Ọ dabere na ịrụsi ọrụ ike na ịdị uchu na-egwupụta "ite ọlaedo mbụ".
Phoenix nirvana, bilie ọzọ
Ọ bụ ezie na Liu Jianhong na-etinye akụ ma na-akwadebe ime ka ọrụ ya ka ọ kawanye ibu, ọ nwedịrị mbibi ka ukwuu. Na 1996, n'ihi na ọ chọsiri ike ịga nke ọma. E wepụtara otu ego n'echeghị echiche, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde yuan gbakọtara na ịrụsi ọrụ ike tụbara n'otu ntabi anya. Iji dị ndụ, Liu Jianhong na nwunye ya rere ahịhịa na n'okporo ámá. Di na nwunye ahụ rụsiri ọrụ ike ruo otu afọ ma chekwaa yuan 20,000. Na 1997, Liu Jianhong buuru yuan 20,000 n’akpa ya wee gaa Guangxi ọzọ iji chọta ebumnuche azụmaahịa ya na nrọ nke ya. Mgbe afọ 5 gasịrị, otu ego ahụ bụ yuan 20,000, agakwara m n'otu ebe ahụ ọzọ. Liu Jianhong jupụtara na mmetụta uche, mana n'adịghị ka oge ikpeazụ, ọ nwere ahụmịhe na ntụkwasị obi karịa. Ochicho ahia ya siri ike ma nwekwuo obi uto banyere nrọ ya. Nchụso ahụ na-adịgide adịgide, ma n'otu oge ahụ nwere obi ike ma dị uchu karị, ma tozuru oke ma kwụsie ike karịa afọ ise gara aga.
Mgbe Liu Jianhong na-achọsi ike, ọ chọtara na mberede na ebe ana-egbu anụ ebe a akwakọbala ihe mkpofu ụfọdụ nke ọbọgwụ ọbọgwụ na-enyocha. Ahụmahụ ọ nwere ike ịhụ n'eleghị anya na ihe mkpofu ndị a nwere ọtụtụ ajị anụ. O chere na ọ bụrụ na ọ ga-ekewa ntutu isi ya, na ọ ga-enweta ego. Yabụ, o ji ihe karịrị yuan 20,000 bufee ihe karịrị puku 30,000 nke mkpofu ma bufee ya n'ụlọ. Mgbe ọ lụrụ ọgụ ruo ọtụtụ ụbọchị, ehihie na abalị, ọ kewapụrụ ihe karịrị 10,000 cat nke ajị anụ ma nweta uru n 'ego karịrị yuan 200,000. Otu ikuku na udu mmiri, otutu oge opupu ihe ubi na udu nmiri, ikuku, ntu oyi, snow na mmiri ozuzo na eti Rapids. Kemgbe ọtụtụ afọ, Liu Jianhong enwetawo ụfọdụ ego.
Naanị ịme ihe nwere ike bụrụ "onye na - erite uru", ọ bụghị onye ọchụnta ego. Na 1999, Liu Jianhong debanyere Jinlida Down Products Factory, debanye aha aha ahụ, wee banye n'ọhịa nke mmepụta ngwaahịa. Ọ banyere n’ahịa ahụ ọtụtụ ọnwa, jiri nlezianya na-enyocha ahịa ahụ, ma na-echepụta usoro mmepụta na atụmatụ ahịa. N'ihe banyere nkà ihe ọmụma azụmahịa, anyị siri ọnwụ mgbe niile na "merie ndị ahịa na iguzosi ike n'ezi ihe na ịzụlite ahịa na amamihe". Na njikwa azụmaahịa, ọ na-ekwusi ike mgbe niile na "sayensị na teknụzụ bụ isi ọrụ na-arụpụta ọrụ". N'okpuru nduzi nke Liu Jianhong, ụlọ ọrụ mmepụta ihe mepụtara nke mbụ nke duvets ma bulie ma ree ha site na ọwa dị iche iche. Banyere oge oyi nke 2000, o nwere ihe karịrị ụlọ ahịa aha 50, ihe karịrị ụlọ ahịa 20, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obodo dị iche iche na ógbè dị na mpaghara ugwu. Factorylọ ọrụ ahụ jupụtara n'ike na ume. Ka ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, ọ na-eche mgbe niile banyere ya: Iji bụrụ nnukwu, ụlọ ọrụ ga-eleba anya na ahịa na ụwa.
Ọganihu na-aga n'ihu, n'ọkwa dị elu
Otu iberibe obere nku enweghị ọdịnaya teknụzụ dị ala. Liu Jianhong duru ụlọ ọrụ na-esi ọnwụ na-amị kpam kpam dị na mba ụkpụrụ. Ozugbo ngwaahịa ndị ahụ dara, ndị ahịa nabatara ha wee merie "National Excellent Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", na "Consumer". Ndị nwere ike ịtụkwasị obi na ngwaahịa a, "nkwekọrịta na ntụkwasị obi" na onyinye ndị ọzọ. Mmepe nke ngwaahịa, imepụta akara ala, na ịkwalite ọdịnala ụlọ ọrụ abụrụla nsogbu Liu Jianhong na ndị otu ya na-eche. Mgbe ọbịbịa nke afọ ọmụma Internetntanetị, Liu Jianhong nọ na-aga n'ihu na oge, na-anakọta ozi ahịa site na ,ntanetị, na-ere ụlọ ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ na ntanetị, wepụta iwu na ire ahịa na mba ahụ dum, ahịa wee jiri 50% mụbaa
Na 2003, Liu Jianhong gbanwere aha Jinlida Down Products Factory na Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., wee gbasaa ụdị ngwaahịa ahụ n'okpuru akara nke "Liteshu", site na nke mbụ otu na-agbada na-ehi ụra akpa, Ọtụtụ ngwaahịa dị ka jaketị ala na ala cushions. Na 2005, "Liteshu" niile gafere ISO9001: 2000 asambodo njikwa njikwa mba ụwa. "Liteshu" meriri ntụkwasị obi na mma, nweta ọtụtụ iwu, wee bido ịbanye n'ahịa mba ụwa. Ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ruru ihe karịrị 100,000 iberibe afọ ahụ, ọnụ ahịa mmepụta ahụ karịrị yuan 50. Na 2006, ụlọ ọrụ "Liteshu" na France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. sonyeere aha na ịtọlite ​​Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd., wee bupụta usoro "Xueruisha". Na 2009, o tinyere nnukwu ego iji mepụta ụghalaahia ama ama "Edelweiss", bụ isi nke Xueruisha. Ngwaahịa a na-ere nke ọma n'ọtụtụ obodo ukwu na ọkara dị ka Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, wdg, na ọkwa n'etiti ugwu ndị njem nlegharị anya nke oge oyi na Europe na America, ndị ahịa na mba ndị a na mpaghara ndị a masịrị ha. Na 2010, Xueruisha tinyere ego na itinye ụlọ ọrụ nnukwu ọbọgwụ ise na Shandong, na-emepụta kwa ụbọchị ntụ ntụ 190,000, wee jiri nwayọ wepụta usoro ọrụ otu nkwụsị nke ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ na azụmaahịa. Na May 27, 2014, Xueruisha Down Products Co., Ltd. ka edepụtara nke ọma dị ka ụlọ ọrụ mbụ na Baoding ka ọ rute na isi ụlọ nke Shijiazhuang City. N'ime afọ 20 gara aga, Xueruisha Down Products Co., Ltd. azụrụla, hazie ma ree ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 50,000; mepụta ma ree 2.2 nde ngwaahịa. Ihe ndị a niile na-eme Liu Jianhong jupụtara na ntụkwasị obi na mmepe ụlọ ọrụ n'ọdịnihu.
Liu Jianhong webatara na ụlọ ọrụ ahụ eguzobela ahịa mba ofesi maka ngwaahịa jaket ala, azụmahịa ya si mba ofesi na-aga n'ihu ruo taa, ma nwee mmekọrịta azụmahịa na ihe karịrị mba 10! Na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ndị ahịa si mba ọzọ, ndị na-emepụta ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ozi gbasara ejiji ejiji na Europe na America, yana ejiji ejiji ejiji agaghị eleda ha anya, nke dabara na ụdị ejiji ejiji nke ndị ahịa ụlọ. A na-emezigharị nkọwa niile n'ụzọ ọ bụla. "Mana Akwụkwọ Ada ada ga-alaghachi na mgbọrọgwụ ya. N'agbanyeghị agbanyeghị ahịa mba ofesi na-amata anyị, ọ bụrụ na anyị enweghị ike ikpokọta mmetụta dị n'etiti ndị na-azụ ụlọ, anyị enweghị ike ịbụ mba mba. Liu Jianhong na-eche.
Kemgbe afọ 2013, gọọmentị Anxin County emezigharịala ụlọ ọrụ mgbada. Liu Jianhong butere ụzọ n’iwulite ụlọ ọrụ na-ekpofu nsị mmiri iji nweta ụkpụrụ ọpụrụpụ mmiri. N'otu oge ahụ, iji gbochie mmetọ ikuku, igwe ọkụ ọkụ na-ere ọkụ gbanwere site na kol na ọkụ. gas nkịtị.
Na 2015, Xueruisha Group debara aha dị ka Hebei Rongdu Electronic Commerce Co., Ltd., wee guzobe ebe nrụọrụ weebụ na ọdịnihu na-aga n'ihu na Bohai Commodity Exchange, ma guzobe ụlọ nkwakọba ihe nchekwa dị n'ebe ugwu, na-eme ka ịdị n'otu dị ala. .
Jikọọ na mpaghara ọhụrụ, gbanwee ma melite
N'April 1, akụkọ banyere nguzobe nke Xiong'an New District bịara. Dịka onye ọchụnta ego na-arụsi ọrụ ike site na ala, Liu Jianhong nwere ezigbo obi ụtọ maka ohere mmepe na obodo ya, n'otu oge ahụ, ọ na-eche echiche miri emi banyere otu esi etinye aka na iwu nke mpaghara ọhụrụ ahụ.
Dịka onye isi oche nke Chamberlọ Ọrụ Azụmaahịa nke Hebei Down, Liu Jianhong kwupụtara na ọ ga-akwado nkwado nke iwu mpaghara ọhụrụ ahụ ma na-ebute ụzọ na nrube isi na mkpebi nke mpaghara ọhụrụ ahụ. N'otu oge ahụ, dịka ihe ndị achọrọ mpaghara ọhụrụ ahụ, yana njirimara nke mpaghara ọhụrụ ahụ, anyị ga-eme ike ọ bụla iji kwadebe maka mgbanwe na nkwalite nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke mbụ bụ ịnọgide na-agbasa ụlọ ngosi ihe ngosi ala, ịrụ ezigbo ọrụ nke njem nleta ụlọ ọrụ, na ịgbasa ahịa nke ngwaahịa ala mgbe ị na-akwalite Baiyangdian na mpaghara ọhụrụ ahụ; nke abụọ bụ ịdabere n'ọdịnihu dị elu na nnukwu data uru nke mpaghara ọhụrụ iji guzobe nyocha ọgbara ọhụrụ na mmepe ala na ngwaahịa. Elydabere na uru nke nnukwu data iji wulite ọdịnihu ma hụ ebe ahịa ịre ahịa n'ịntanetị maka ngwaahịa. Kwe ka mpaghara ọhụrụ ahụ ghara inwe ala na mmepụta ngwaahịa, mana usoro ịre ahịa na netwọkụ na mpaghara ọhụrụ ahụ ga-amata mgbanwe ya na nkwalite ya, ma nyekwa ụlọ ọrụ ahụ aka ịbanye na iwu na mmepe nke mpaghara ọhụrụ ahụ, ka a ghara iwepụ ya oge, na iguzo na-emekarị.
Nwee obi ike iji buru ibu ọrụ ma nyekwuo onyinye
Liu Jianhong na-ekwenye mgbe niile na, na mgbakwunye na mbọ nke ya ịnya ifufe na ebili mmiri, na mmepe nke ịrị elu, Xueruisha Down Products Co., Ltd. bụ ọrụ dịịrị maka ịduzi ụlọ ọrụ mgbada ka ọ dịkwuo mma, ọkwa dị elu na ọkwa mmepe usoro. Site na ịnụ ọkụ n'obi ya, o nwere obi ike iji nwaa ma mepụta ọhụụ, ma na-eme onwe ya ọgaranya oge niile, iji tinye ike ya na ụlọ ọrụ, ndị ọrụ, na ndị obodo ahụ. Mbilite nke ụlọ ọrụ ahụ ewetala ya ọtụtụ nsọpụrụ na aha: "National Textile Industry Model Worker", "Ezigbo Onye ọchụnta ego", "Onye isi oche nke China Down Industry Association", "standinglọ Ọrụ Pụrụ Iche na China Down Industry", "Hebei Down Industry Chamber nke Azụmaahịa "ogologo". Dị ka onye isi ụlọ ọrụ, ọ kere òkè na ntinye nke ụkpụrụ ala nke China Down Industry Association, wee duzie ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ọrụ mmetọ mmetọ na nrụzigharị nke ụlọ ọrụ ala. afọ, ụlọ ọrụ ahụ enyela ọha mmadụ ihe karịrị yuan 2 nde ma nyefee jaket ala 10,000. A na-enye ya aha "Advanced Individual" site n'aka gọọmentị ndị ọchịchị Hebei na onyinye na agụmakwụkwọ na "Charity Enterprise" site na Anxin Obodo Charity Federation.
Innovation bu isiokwu ebighi ebi nke mmepe oru na nkpuru obi nke oru a. Isi atụmatụ na isi echiche nke Liu Jianhong si enterprise management na-guzobere gburugburu okwu "ọhụrụ". O nwere nghọta puru iche nke onwe ya banyere "ihe ohuru": iche echiche banyere ihe ndi ozo na echeghi echiche a na-akpo ihe ohuru, ime ihe ndi ozo emeghi bu nke a na-akpo ihe ohuru; a na-akpọ ihe ụfọdụ ihe ọhụrụ n'ihi na ọ na-eme ka ọrụ na ndụ dịkwuo mma, ụfọdụ n'ihi na ọ na-eme ka ọrụ dịkwuo mma, ụfọdụ na-emekwa ka ọnọdụ asọmpi sikwuo ike. Mana imeputa ihe ohuru ekwesighi ibu udi ihe ohuru, enwere ike tinye ya na udidi ohuru. A na-akpọ ngwugwu ihe ochie ihe ọhụrụ, na inye ihe ntinye ọhụụ ihe ochie na-akpọkwa ihe ọhụrụ; na-agbanwe ngụkọta ego na-enweghị agbanwe ihe owuwu a na-akpọ ọhụrụ, na-agbanwe agbanwe ego na-enweghị na-agbanwe agbanwe ihe owuwu a na-akpọ ọhụrụ.
Ọ bụ kpomkwem n'ihi na nke na-aga n'ihu "ọhụrụ" na ụlọ ọrụ ya na-eto kwa ụbọchị, na ọ bụkwa n'ihi nke "ọhụrụ" na Xueruisha Down Products Co., Ltd. na-arịgo ebube. Ruo ihe karịrị afọ iri nke nrụgide na-aga n'ihu, ihe karịrị iri Site na nyocha ndị na-enweghị mgbagha, Liu Jianhong na ndị ọrụ njikwa ya na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmaahịa nke "mmepe ọhụụ, ịkwụwa aka ọtọ na ịkwụwa aka ọtọ", nke meriri nnabata ndị ahịa na nkwenye nke ngalaba niile nke ọha mmadụ.
Post oge: Nov-27-2020